Italia dia nanitatra ny lisitry ny hetsika ilaina amin'ny fanaovana vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Italia dia nanitatra ny lisitry ny hetsika ilaina amin'ny fanaovana vaksiny
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Green Pass dia tsy maintsy atao ho an'ny mpampianatra, ny mpianatry ny oniversite ary ny olona mandeha mampiasa fitateram-bahoaka lavitra ny 1 septambra.
Green Pass any Italia dia antontan-taratasy dizitaly na taratasy izay mampiseho raha nisy olona nahazo fatra vaksinin'ny COVID farafaharatsiny, na nanandrana ny ratsy, na sitrana tamin'ny otrikaretina.
Nanjary voatery ny ID tamin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana sy kolontsaina tamin'ny 6 Aogositra.
Ny orinasa manao tsirambina ny fampiharana ny lalàna dia mety miteraka lamandy ho an'ny mpanjifa sy ny toerana manomboka amin'ny € 400 ka hatramin'ny 1,000 €.
Nanambara ny tompon'andraikitra italianina fa nanitatra ny lisitry ny hetsika mahazatra ny governemanta ao amin'ny firenena izay mitaky porofon'ny vaksiny COVID-19 na statut coronavirus ratsy.
Isaky ny fanambarana anio, Passaire Green an'ny Italia tsy maintsy atao ho an'ny mpampianatra, mpianatry ny oniversite ary olona mandeha amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka lavitra ny 1 septambra.
Ny minisitry ny fahasalamana any Italia Roberto Speranza dia nilaza fa ny fanapaha-kevitra hanitatra ny lalàna hampiharina amin'ny sekoly sy ny fitateram-bahoaka dia natao mba “hisorohana ny fanidiana sy hiarovana ny fahalalahana.”
Ny Green Pass dia antontan-taratasy dizitaly na taratasy izay mampiseho raha efa nahazo vaksinin'ny COVID-19 farafaharatsiny ny olona iray, nanaporofo fa ratsy, na sitrana tamin'ny aretina coronavirus, ary mitovy amin'ny taratasim-pahasalamana navoakan'i Frantsa vao haingana. .
Ny Green Pass dia nanjary voatery tamin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana sy kolontsaina italiana, anisan'izany ny tranombakoka, kianja, sinema, gym ary faritra ipetrahana ao amin'ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana, ny 6 aogositra.
Ny tsy fampiharana ny lalàna vaovao dia mety handoa onitra ho an'ny mpanjifa sy ny toerana manomboka amin'ny € 400 ka hatramin'ny € 1,000 ($ 470 ka hatramin'ny $ 1,180). Ireo andrim-panjakana izay manitsakitsaka hatrany ny risika mety hikatonan'ny manampahefana hatramin'ny 10 andro.
Ny praiminisitra italiana Mario Draghi dia nandray fepetra henjana mba hampiakarana ny tahan'ny vaksiny COVID-19 any amin'ny fireneny. Tamin'ny volana martsa, ny praiminisitra dia nandidy ny hanaovana ny jab ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra. Ny governemanta dia nandidy io sotasota ara-pahasalamana io ho fomba iray hafa hanamafisana ny tahan'ny vaksiny.
Italia dia nanoratra fahafatesan'ny olona mararin'ny coronavirus miisa 27 tamin'ny alakamisy, raha ampitahaina amin'ny 21 iray andro talohan'io, hoy ny tatitra nataon'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ao amin'ny firenena, raha ny isan'ireo tranga vaovao dia nahatratra 7,230 tamin'ny 6,596. Italia sy firenena maro hafa dia nanondro ny karazana Delta azo alefa bebe kokoa hanamarinana ireo fepetra fanaraha-maso vaovao mampiady hevitra.